Ugboro abụọ kacha mma eji eme ihe eji eme mmiri na-aga n'ihu FactoryPrice-Rayson | Rayson
Rayson na Rayson Industrial Mpaghara, Huasha Road, Shishan, Foshan High-Tech Mpaghara, Guangdong, China. Main ngwaahịa Best ugboro abụọ ojiji ojiji mmiri opupu ihe ubi FactoryPrice-Rayson
Ngwaahịa a abụghị naanị ihe a ga-etinye ya na mbara igwe mana ọ na-emecha oghere. - Otu n'ime ndị ahịa anyị kwuru.
Ebe amụrụ: Guangdong, China (ala)
Ahịa: Rayson, OEM
Nkwụsi ike: Soft / Ọkara / Ike
Okwu ahia: EXW, FOB, CIF, Ọnụ ụzọ ruo n'ọnụ ụzọ
Companydị ụlọ ọrụ: Factory, rụpụta
Akwa: kpara akpa
Ngwa: Home, nkwari akụ, ulo
Oge ịkwụ ụgwọ: TT / LC, 30% MGBE A GA-akwụ ụgwọ tupu mmepụta, 70% NKWUKWU ND THE KPỌR OF NA OFBỌCH D NDUM NA-EME 7
Anyị na-agbaso usoro njikwa njikwa ọkọlọtọ iji hụ na ngwaahịa anyị na-ezute ma ọ bụ gafere atụmanya ndị ahịa anyị. Na mgbakwunye, anyị na-enye ọrụ ndị na-ere ahịa mgbe achara ahịa maka ụwa niile. Mgbe afọ nke mmepe, anyị guzosie ike ogologo oge nkwado mmekọrịta anyị na ndị ahịa n'ụwa nile. Biko nwee obi ike na anyị nwere ikike ịbupụ ngwaahịa anyị na ọ nweghị mmebi dakwasịrị ngwaahịa enyere. Anyị ji obi anyị na-anabata gị ase ma na-akpọ. Site na usoro mmepụta na ndị ọrụ nwere ahụmahụ, Rayson nwere ike iji aka ya chepụta, mepee, rụpụta ma nwalee ngwaahịa niile n'ụzọ dị mma.
Ogologo oge ole ka akwa ụra gị kwesịrị ịdị? Matarasị ọ bụla dị iche. Ọ bụrụ n ’ị na-amali elu n’abalị ma ọ bụ jiri ụra teta ụra oge eruola ka ị nweta akwa ụra ọhụrụ n'agbanyeghị afọ ole ọ dị Anyị na-akwado ịlele akara iwu ma dochie opekata mpe afọ asatọ ọ bụla. Kedu usoro ịkwụ ụgwọ ị na-anabata? LC na anya / site na TT, 30% Deposi na 70% nguzogide megidere akwụkwọ mbupu akwụkwọ bụ ndị arụ ọrụ ụbọchị 7. 1. Tinye katoonu n’elu ụlọ dị larịị n’ime ime ụlọ ihi ụra gị, jiri nwayọ wepụ matarasị ma dina n’elu ihe ndina gị. Kpachapụ anya bekee mpụga akpa na mkpa iji jide n'aka na ọ bụghị bee plastic ọjọọ n'ime ma ọ bụ matarasị, adịghị kpọpụ a mma. 3.Rụfee ihe ndina ahụ na-ekpuchi agụụ n’elu akwa gị 4. Jiri nlezianya belata akpa rọba tinyere elekere ka matarasị ahụ malitere ozugbo, Wepu akpa rọba Kwe ka awa iri abụọ na anọ mee ka akwa akwa ọhụrụ gị gbasaa n'ụzọ zuru ezu. Mbukota 1.Flat abịakọrọ na pallet osisi
2.Roll up with katọn or kraft paper
HighQuality otu mmiri matraasi N'ogbe-Rayson
Matraasi na-ere ere dị mma ọnụahịa
Nkịtị Ala Na-adịghị Agbachi Nkịtị N'abalị